Nabadoonada G Bari “Bulshadu haku xamdiso Raxmaadka uu Eebe Siiyay”+sawiro – SBC
Nabadoonada G Bari “Bulshadu haku xamdiso Raxmaadka uu Eebe Siiyay”+sawiro
Posted by Webmaster on May 10, 2012 Comments
Nabadoonada Gobolka Bari oo yeeshay kulan ay Bulashada ugu Baaqayaan in ay Ku Xamadi Naqaan raxmaadka Eebe siwanaagsana uga fa,idaystaan.
Kulankan ayaa ahaa mid ay isugu yimadeen Nabadonada gobolka Bari wuxuuna kulanku ka dhacay xafiiska Nabadoonada gobolka Bari ee magaaladatan Bosaso.
Kulnka Nabadoonada waxaa gudoominayey gudoomiyaha Nabadoonada Gobolka Bari Nabadoon C/duqaadir Axmad iBraahim[Xarago].
Ujeeda kulanaka ayaa ahay mid kusalaysnayd sidii Bulashada ku dhaqan deeganada Puntland loogu baraarujin lahaa in ay ku shugriyaan Nicmada Roobka ah ee uu Eebe ku hooriyay deegaanada Puntland in badan oo kamida .
Gudoomiyha Nabadoonada gobolka Bari C/duqaadir Axmad ibraahim oo ugu horyntii kulanaka kahadlay ayaa in badan ku dheeraaday ka shekeynta Nimcada Eebe iyadoo Nabadoonku uu madasha kulanka ka Akhriyay Aayado badan oo kahadlayay Nimcada Eebe iyo waliba sida looga baahan yahay in Adoomadu ay alle u Xamadi Naqaan xiliga Nimcada ah,
Nabadoonku waxa uu Bulshada ku booriyay in ay siwanaagsan oo islaan nimo ku jirto ay Bulshadu uga fa,idaystaan Nimcooyinka alle .
Yuusuf Faarax Cali gudoomiye kuxigeenka Nabadoonada gobolka Bari oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in ay muhim tahay in Bulshada ku dhaqan deegaanada Puntland aya ka shaqeyaan Amaanka sidoo kalana ay la shaqeyaan hay,adaha qaabilsan dhanka amniga.
Sidoo kale Nabadoon C/duqaadir Axmad Ibraahim Xarago ayaa u mahadceliaya Ciidamada Amaanka ee Puntland gaar ahaan kuwa magaalada Bosaso oo dhawaan hawlgal ay sameeyeen ku soo qab qabtay dad ka ganacsanayey maandooriyaha khamriga nabadoonku waxa uu Dawlada iyo waliba hay,adaha garsoorka Puntland ka dalbaday in dadkaasi sharciga islaamka lagu qaado.
Kulankan maanta ay yeesheen Nabadoonada Gobolka Bari ayaa waxaa ka soo qayb galay in kabadan Toban Nabadoon waxaana kulankan uu ahaa mid ku saabsan in Alle loogu Mahad naqo Nimcadiisa uu Shubay.
Cismaan Saalx Ismaaciil
waa arin wanaagsan